Toulouse 1 University Capitole - Education in Frantsa
fanafohezan-teny : OUT1
Créé : 1229
Aza adino ny miresaka momba Toulouse 1 University Capitole
Misoratra anarana ao amin'ny Toulouse 1 University Capitole
Nataony ho amin'ny fikatsahana ny tsara sy matihanina akademika fahaizana toy ny tany am-boalohany toy ny 1970, rehefa nisokatra, Toulouse 1 Capitole anjerimanontolo ho an'ny daholobe no fananganana izay niandoha avy amin'ny Faculty of Canon Law namorona in 1229 Mpanjaka Saint Louis. ankehitriny, dia Lalàna, Toekarena sy Management University izay laharam-pahamehana dia ny zava-dehibe eo amin'ny tambajotra iraisam-pirenena mba hampiroborobo ny fiarahamiasa ara-tsiansa ary koa ny mpianatra sy ny mpampianatra mpikaroka-'fifanakalozana.
Izany no iray amin'ireo orinasa frantsay roa ihany no mba manasongadina an-tampon'ny 100 ny Shanghai World Academic fandaharana ao Toekarena / Business fampianarana.
Afovoan-tanàna telo campus any Frantsa, in Toulouse, Montauban sy Rodez.
Telo orinasa any ivelany: i Vietnam, Maraoka sy Vanuatu.
Ny iray amin'ireo laharam-pahamehana ny Toulouse 1 Capitole University dia ny hampitombo ny iraisam-pirenena sy ny Eoropeana hery mitarika.
Ny asa mifantoka amin'ny 4 manan-danja faritra: Mpianatra sy mpampianatra fifanarahana fifanakalozana, fiofanana dia manolotra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa avy any ivelany, asa fikarohana sady mitombo anglisy-nampianatra taranja amin'ny tolotra.
UT1 Capitole ranomandry mavitrika nanao ho maro ny iraisam-pirenena sy ny tambajotra Eoropeana.
UT1 Capitole ankehitriny mihazona ny Erasmus + Sata izay manome ny ankapobeny rafitra ho an'ny Eoropeana fiaraha-miasa ny asa atao A fianarana ambony dia mety hanatanteraka fikambanana ao anatin'ny fandaharana ny Erasmus.
21 100 mpianatra eo izay 19.5 % mpianatra iraisam-pirenena sy ny 36% Grant mpihazona
14 Research vondrona eo izay 5 UMR (CNRS sy INRA) ary 9 EA
3 doctorat sekoly + 3 mpiara-voamarina sekoly
90 taratasy misy hevitra niaro taratasy misy hevitra isan-taona
14 580 m² ny akademika toerana
35 M € fikarohana teti-bola (2M € fampiasam-bola, 24M € karama, 4 M € fandidiana ny vola lany)
fahaizanareo, SEKOLY sy Institiota
Toulouse Sekoly’ toekarena (tse)
IAE Toulouse, Sekolin'ny Management (IAE)
Faculty ny Fitantanan-draharaha sy ny CommunicationStudies
Faculty ny Information Technology
Ara-batana sy Sports Activities departemanta (DAPS)
Fiteny sy ny sivilizasiona departemanta (DLC)
Siansa politika sy ny bola ary departemanta
Eoropa Sekolin'ny Lalàna (ESL)
Fitsarana Studies Institute (iej)
Toulouse 1 University Capitole no faharoa noforonina oniversite tany Frantsa in 1229 taorian'ny Sorbonne nisiany mponina (manodidina ny taona 1200). Ny oniversite efatra tany am-boalohany dia ahitana fahaizanareo: teolojia, Canon lalàna, sivily ny lalàna sy ny Zavakanto (fitsipi-pitenenana). Ny dokotera sekoly noforonina tao 1257. Ny University nakatona in 1793 tahaka ny Revolisiona Frantsay nahafoana ny herin'ny mpanjaka anjerimanontolo.
Any amin'ny faran'ny Fanjakana ny Faharoa, efatra voalohany fahaizanareo Niara-nisy, fa ny manan-danja indrindra dia ny lalàna sekoly, izay ahitana ny telo-vazan-mpianatra sy ny mpampianatra nalaza indrindra. Na izany aza, ny Oniversiten'i Toulouse nijaly noho ny fahampiam-frantsay fampianarana ambony ao amin'ny faritany. Ao amin'ny 1880s Luis Liard sy Ernest Lavisse nanome ampy fizakantena ny fahaizanareo ny kaominina mba afaka manampy ireo andrim-panjakana. Kanefa ny Edgar lalàna Faure nijanona ny fampandrosoana ny faritra fahaizanareo amin'ny nampisaraka ny anjerimanontolo ao anatin'ny telo:
Toulouse 1 University of Social Sciences (lalàna, Toe-karena sy ny Management);
Toulouse 2 University boky aman-gazety sy ny Human Siansa;
Toulouse 3 University Paul Sabatier ny Siansa sy Fahasalamana.
Ihany ny Toulouse 1 University mbola eo amin'ny ara-tantara ny tanàna toerana foibe. Tamin'ny Septambra 2009, ny Toulouse 1 University ny Siansa Sosialy lasa ny Toulouse 1 University Capitole.
Ianao ve mila miresaka momba Toulouse 1 University Capitole ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Toulouse 1 University Capitole amin'ny Map
Photos: Toulouse 1 University Capitole ofisialy Facebook
Toulouse 1 University Capitole Hevitra
Miaraha mba hiresahana ny Toulouse 1 University Capitole.